Jereo Faedo de Ciñera, ala beech tsara tarehy | Vaovao momba ny dia
El Faedo de Ciñera no anarana ala ala beech tsara tarehy miorina amin'ny fiarahamonina León, eo anelanelan'ny tanànan'ny Villar del Puerto sy Ciñera de Gordón. Ity ala ity dia tafiditra ao anatin'ny faritra arovana ao amin'ny Reserve Biospera Alto Bernesga. Taona vitsy lasa izay ny Minisiteran'ny Tontolo iainana dia nanome azy ny loka noho ny ala tsara indrindra any Espana, izay manome antsika ny hevitry ny harena sy ny hakantony voajanahary.
Kely fitsangatsanganana mankany amin'ny toerana mahafinaritra toa an'i Faedo de Ciñera Mampianatra antsika izany fa ny dia dia tsy tokony hifantoka amin'ny fahitana tanàna lehibe na toerana itodiana malaza fotsiny, fa koa hikaroka amin'ireo toerana kely. Ity ala ity dia manome antsika fialantsasatra mahafinaritra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny làlana fitsangatsanganana amin'ny faritra voajanahary.
1 Torohevitra hahita Faedo de Ciñera
2 Làlana fitsangantsanganana
3 Rahoviana no hitsidika an'i Faedo de Ciñera
Torohevitra hahita Faedo de Ciñera
Ity faritry ny ala dia an-tongotra fa tsy dia malalaka izy ireo ary tsy misy olana sarotra loatra. Izay no mahatonga anao tsy mila manao fiomanana be loatra. Na izany aza, rehefa mandeha amin'ny làlana sasantsasany isika dia tsara foana ny mitondra kitapom-batsy misy sakafo sy rano, indrindra raha miaraka amin'ny ankizy isika. Ho fanampin'izany, afaka mitondra kitapo isika mba hialana amin'ireo zavatra na fako ao amin'ilay faritra. Zava-dehibe ny mitafy akanjo mety amin'ny diabe. Tokony hotadidintsika fa na dia mandeha amin'ny toetrandro tsara aza isika any amin'ireo faritra mando amin'ny ala mando toy ireo dia afaka mangatsiaka kely. Ka tsara kokoa hatrany ny mitondra zavatra mafana sao sanatria. Ilaina tokoa ny kiraro ahazoana aina miaraka amina fangejana tsara, satria ireo ala miaraka amin'ny faritra mando misy azy ireo dia mety hanana toerana misy fidirana ratsy kokoa na toerana ahazoana misosa. Manaja ny tontolo iainana mandrakariva ary mandray ny toetr'andro sy ny ora mazava, tsy mila miomana irery isika hiaina traikefa tokana. Raha mitondra ny sakafo isika dia mety hanana piknikika mahafinaritra any amin'ilay faritra misy latabatra akaikin'ny ala.
Raha ny manao ny làlana fitsangantsanganana amin'ny alàlan'ny Faedo de Ciñera no tadiavinao dia manana safidy hafa ianao. Ireo lalana ireo dia manomboka amin'ny tanànan'ny Ciñera de Gordón, tanàna iray sahabo ho XNUMX kilometatra miala an'i León. Avy eto ny lalana dia mety ho kely, kilometatra roa na lehibe kokoa, an'ny hatramin'ny 11 kilometatra, miankina amin'ny tiantsika hatao. Ny zotra lavitra dia ny làlan'ny mpitrandraka ao amin'ny Villar del Puerto hidirana amin'ireo toeram-pitrandrahana ao Ciñera. Amin'ny voalohany, azonao atao ny mahatratra faritra iray misy latabatra sy dabilio izay faritra fitsangantsanganana ahafahanao mijanona hisakafo. Mamakivaky ity faritra ity ianao amin'ny lalana miverina, ka maro no miaro sakafo rehefa vita ny làlana.
Raha manohy ny làlana isika, dia manohy amin'ny alàlan'ny ala ary rehefa mandalo tetezana sy faritra sasany misy rano isika dia tonga any amin'ny ala beech, izay iray amin'ireo faritra mahafinaritra indrindra. Mifarana eto ny zotra kely indrindra, na dia tsapantsika aza fa afaka manohy mizaha ilay faritra isika satria mitohy ny làlana. Ary koa, aty aoriana dia ho afaka hahita zavatra mahaliana hafa any anaty ala isika. Iray amin'izany ny Arroyo del Villar izay miampita ny ala ary mameno ny zava-drehetra amin'ny feon-drano izay majika. Mila mitandrina amin'ny faritra mando ianao mba hisorohana loza. Misy ihany koa ny faritra tsy dia azo idirana sy be vato izay tokony hitandremanao fa ity faritra ala ity dia tena tsara tarehy ary mendrika ny hanaovana ny lalana rehetra. Etsy ankilany, azontsika atao ihany koa ny mahita ny beech tranainy indrindra any anaty ala izay heverina ho iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny Espana rehetra. Ity beech ity dia nantsoina hoe Fagus ary inoana fa 500 taona teo ho eo.
Rahoviana no hitsidika an'i Faedo de Ciñera
Ity ala beech ity dia manome antsika tontolo miova mandritra ny taona. Na dia fotoam-pahavaratra aza ny fahavaratra noho ny toetr'andro mahafinaritra ahafahantsika manao fitsangatsangana miaraka amin'ny fotoana hafa mety hahaliana ihany koa. Fotoanan'ny fararano izao ala beech mahazo hitafy ny endriny tsara indrindra ary rehefa misy mpitsidika bebe kokoa hahita ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ity toerana ity. Ny loko izay hita amin'ireo hazo ireo amin'ny fararano dia mahatonga ny faritra ho toy ny toerana angano, toerana majika tanteraka izay manome fotoana tsara antsika hanaovana ireo dia an-tongotra. Tsara kokoa ny misoroka ny fitsidihana amin'ny ririnina satria afaka mandatsaka orana izy ary misy hamandoana bebe kokoa ary tsy dia azo idirana, ankoatry ny sery. Izany no antony ny fotoana tsara indrindra dia ny lohataona, raha ny ala dia amin'ny voninahiny rehetra, na amin'ny fararano, rehefa manana loko manokana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Faedo avy any Ciñera